Diintu maxay ka qabtaa siigada
» Diintu maxay ka qabtaa siigada
Eebbe Subxaanahu Watacaale waxa uu Aayadaha Qur’aanka ku leeyahay:
(kuwa xubnohooda taran dhowra. Aan ka ahayn xaasaskooda iyo addoomadooda ayagu eed ma laha. dadkiise intaa kadib wax ka doonaa way xad gudbeen. Suurat Al Mu’minuun: 5-7).
Aayadahaa Qur’aanka ah waxa kaaga iftiimaya in ruuxii macaan iyo raaxo ku doona hab aan galmo xalaal ah ahayni uu xadkii Eebbe gudbay.
Rasuulkeenna suubban Muxammad (SCW) waxa laga weriyey Xadiis uu ku yiri: (Dhallinyarooy, kiinnii awoodi karaa ha guursado maxaa yeelay guurku aragga waa u dabool ibtana waa u gaaashaan. Ninkaan awoodi karinse ha soomo, soonkaa shahwada ka jebinayee). Xadiiska waxa soo saaray Muslim iyo Bukhaari.
Haddaba hadduu Rasuulku (SCW) ogyahay faa’iido ay caadada sirta ah (Seego) leedahay, dhallinyarada ayuu ku boorrin lahaa, waxase uu koodii awood (Meher, Marasho iyo Masruuf) heli kara, ku boorriyey inuu guursado, kaan awoodinna inuu shahwada isaga jebiyo qaab cibaado ah (Soon) ajarna ka helayo, dhibaatadii shahwadana iskaga reebayo.
Culimada diinta Islaamka intoodii badnayd way xaaraantinimeeyeen Seegada (Caadada sirta ah). Mad-habadaha Shaaficiya, Maalikiya iyo Xanbaliya intuba way xaaraantinimeeyeen iyagoo u daliishanaya Aayadaha aynu kor kusoo sheegnay ee Suurat Al-Mu’minuun ku jira. Madhabta Xanafiya, iyadu waxay leedahay Seegadu assal ahaan waa xaaraan, waxayse ku bannaanaan kartaa saddex shardi haddii si wadajir ah loo helo:
1- In uusan ninku naag qabin.
2- Inuu isaga baqayo xaaraan (Sino) uu ku dhaco haddaanu seegaysan. Taasi oo diinta loogu yeero: “Laba daran tii dembi yar dooro”.
3- In uusan ula jeedin inuu ku raaxaysto, balse ula jeedo inuu shahwada isaga jebiyo.
Haddaba Seegadu guud ahaan diinta Islaamka waa ku xaaraan, maadaama aanay ahayn qaabkii dabiiciga ahaa ee uu Eebbe ugu talagalay in shahwada la’isaga shubo, balse ay tahay wadiiqo weecsan, qofkana waxay barto waxay baddaa uga daran, hadduu mar qofku qabatimana siduu naftiisa u qabto oo isaga gooyaa ay adagtahay.
SIDEE LA’ISAGA GOOYAA SEEGADA
Hablaha iyaga boqolkiiba inta seegaysataa waay kayar yihiin wiilasha, sababahaan soo socda awgood:-
Waxa la caddeeyay in casrigaan cusub dumarka seegaystaa aanay ka yarayn 50%, meelaha qaarna ayba gaaraan 70-90%. Dumarka caynkaasi ahi waxay u badan yihiin kuwa aan weli bislaan iyo kuwa qaba qabow jinsiyeed (ereygaasi oo sida caadiga ah loogu yeero dumarka aan galmada ku raaxaysan).
Anigu – qof ahaan – shaki weyn baan ka qabaa in hablaha Soomaaliyeed ama badankoodu ay Seegaysi garanayaan, waxanan taa sabab uga dhigayaa gudniinka Fircooniga ah.
MAXAA KEENA SEEGAYSIGA
1 Sababaha keena seegaysiga waxa ugu horreeya inay qofka u fududaan weyso inuu helo xabiib uu ka xaaja guto, sidaasi buuna ruuxa cid wax la qabata intuu waayo, gacmahiida biyaha isaga saaraa. Seegaysiga caynkaasi ahi waxa uu ku badan yahay dadka ka fog jinsiga kale sida; ardayda dhigata kulleejooyinka (Boarding Schools), cusbitaallada, xabsiyada, warshadaha, ciidanka badda, dumarka aan la guursan, garoobbada iyo dumarka laga dhintay.
2- Waxa kale oo seegaysiga keeni kara in qofku uu ka dido galmada oo uu u arko wax xun sida wiil dhallinyaro ah oo lagu barbaariyay in galmada guurka hortiis cadaab lagu muteysto, isaga oon awoodna u lahayn inuu guursado. Waxa kale oo dhacda in qofku uu ka dido urta qofka kale, taasi oo keenta nacayb uu u qabo jinsiga kale sidaasina uu ku seegaysto.
3- Waxa dhacda in ragga qaar kolka ay u galmoonayaan haweenkooda ay si degdeg ah u biyabbaxaan, dumarkoodii oon weli gaarin heer biyabbax, taasi oo markaasi dumarka caynkaasi ah ku kallifta inay seegaystaan.
4- Seegaysiga carruurta waxyaabaha doorka libaax ka qaata waxa kamid ah finan yaryar oo ka soo baxa dubduleedka xubinta taranka (sida isnadaamiska oo kale), oo siduu u xoqayo uu si lama filaan ah u kaco geedkii, dabeetana uu sii macaansado ilaa uu biyaha tuuro, sidaasina uu ku barto kuna caadeysto seegaysiga.
5- Waxa kale oo ay da’ yartu seegaysiga ka baran karaan saaxiibadooda kale haddii ay seegaystaan, inankuna sida uu saaxiibkii sigaar cabista uga barto si lamid ah buu seegaysigana uga bartaa.
Ginseng waa geed dabiici ah oo ragga kacsigooda yaraaday xoojiya
Ginseng waa geed aad u daran oo dacbiici ah oo guud ahaan jirka awood u keena gaar ahaan dhinaca galmada, waa geed laga keeno dalka shiinaha iyo kuuriya iyo maraykanka, waxaa loo isticmaali karaa qaabab kala duwan sida shaah oo kale inta loo kariyo ayaa la cabbaa, ama waxaa lagu dari karaa malab, kaddib rooti iyo iwm. baa lagu cunaa, saamaynta geedkan dhinaca galmada waa mid aad u daran ragga isticmaalo waxay dareemaan kacsi daran iyo waxtar weyn oo ay ku qancin karaan xaskooda, maxaa yeelay sida la ogyahay naagta inta badan ninka way ka dambeynaysaa biyabbaxa, marka uu ninka dantiisa dhammaysto, awood kale mala imaan karo oo uu kaga bixin kara naagta biyaha naagtiina way ka xishoonaysaa inay ka dalbato in biyaha laga saaro ileen naagaha way ka xishood badan yihiin nimakga, marka sida ugu fiican oo ninka iyo naagta ay isku fahmi karaan waa in hal mar ay isla biyabbaxaan ninka waxaa laga rabaa inuu naagta ula sugo biyaha, Ginseng wuxuu siinayaa ninka awood kacsiyeed oo naagta lagu hogaamin karo ilaa ay ka biyabbaxdo.
Email is ao_abati@hotmail.com
Tifaftiraha Shabkada BADWEYN
Anonymous5/28/2011asc waad mahadsantahiin akhyaarta webkansifiican ayaad naagaga sheekayseen siigada iyo waxay tahay hadaba waxaan idin waydiin lahaa hadii mudo ayaan ku jiray siigan oo aan hada iska daayay ma laga yaabaa awoodaydii galmo ama jinsiyadeed inay sideedii ku soo noqoto hadii aan faraha ka qaado xunbaha taranku ma ka soo kaban karaan?ReplyDeleteRG5/28/2011haa way ka soo kab karaan haddii aad ka dhaaftoReplyDeletegorod7/07/2011ascm , sida aan ogsoonahay siigada ama marka qoka xubintiisa kufalaadayo way dagdagbadantahy inbayaha si dhakhso badan loo tuuro hada su'aashaydu waaytahy galmada xalaasha ah,imisa ayaa lawada karaa? maygaadhaysaa 30 daqiiro iyo wixii kabadan? fadlan kasoo jawaab. mahasanidReplyDeleteRG7/07/2011taas dadka way ku kala duwan yihiin, dadka siigaysta waxaa ku dhaca cudurka biyabbaxa degdegaReplyDeletebashka9/22/2011asc. waan gatay .dr, arintaas hadee qofka muda faraban ku jiray ,10 sano kareyso sidee iska dhaafi karaa , oon xaas laaheen oona adoodid in oo guursado ,, bal ka jawaab...ReplyDeleteRG9/22/2011waxaa lagaaga baahanyahay inaad sabarto oo aad soonto oo aad ka fugaato wax kastoo ku kicinayaReplyDeleteAnonymous9/23/2011iga jahil bixiya suaasha eh siigo seego maxa lagawataa ma fahmin micnaha siigo afsomali iga sheek waxa lagaho siigoReplyDeleteRG9/24/2011seego waxaa la dhahaa inaad biyaha isaga keento gacantaada iwm.ReplyDeleteAnonymous9/30/2011Ginseng geedka miyuu xoojiyaa haduu xoojiyona wax dhib ah miyuu kuu keenayaa maseReplyDeleteRG9/30/2011wax dhib ah ma keeno guud ahaan jirka ayuu xoojiyaa gaar ahaana bahalka nin ayuu adkeeyaaReplyDeleteAnonymous12/19/2011Marka halke laga heli kara Ginseng teda kale ma sida madecinta oo kale miyaa mase ! ilaa iyo mudo intesa la isticmalaya ? mahadsanidin !ReplyDeleteAnonymous12/27/2011walaal salaam bacda salaan waxaan idin waydiiyey walaal aniga oo yara baan siigada isticmaali jiraya ilaa intaan guri yeeshay oo hada ah 3sano ka hor intan waxba ma dhalin uur ma yeelan dhibka siigada ii keentay waxaa ka mid ah in dhiig iga iman wayo 2ilaa 3bilood dareen malihi markan ninkayaga isku tagano hoosta dhan way i xanuunisa maxaa talo ah mahadsanidReplyDeleteRG12/27/2011dhibka siigada ayaa laga yaabaa inuu kuu keenay kacsi la'aanta waxaa fiican inaad ka towbad keento oo aad iska illowdoReplyDeleteAnonymous12/27/2011Ginseng shaax ah isaga haddii aan isticmalo kawaran mafiicanyahay ?ReplyDeleteAnonymous12/27/2011wan ka toobada keenaya lkn dumar inaanay uur qaadin ma sababi kartaa wllReplyDeleteRG12/29/2011maya seegada ma sabato inay haweeneydu uur qaadinReplyDeleteRG12/29/2011haa shaah ahaan waa loo isticmaali karaa geedka ginseng waa okReplyDeleteAnonymous8/02/2015Asc wlal ku dhawaad 5sano ayaa ku jiraa ila hdana ma gursan o ma awodi qof wax baranayo ayan ahy marka si kasto aan sameyo waan iska jojin waye xita hda subax soomo habenkii ina sameyo igu kaliftaa marka talo ficn isheeg fadlan mahad sanidReplyDeleteRaaxada Guurka8/02/2015Seegada dhib weyn waxay leedahaymarka caado laga dhigto laakin qofka marka biyaha ay ku bataan oo uu ka baqo inuu sino ku dhaco uu biyahaas iska daadiyo isgoon iska keenaynin kacsiga dhib uama keento, laakin haddii aad barto iskama raabi kartidReplyDeleteAnonymous1/25/2016Gedka adshegeysin somali halke laga helaa sese lo isticmala marwalba maan cunaa mise halmar ayaa iigu filan jwbReplyDeleteAdd commentLoad more...